University of Computer Studies,Meiktila University of Computer Studies, Meiktila – Just another WordPress site
To supply required facilities to be able to do seminar and project for improving the qualifications of teachers while doing their tasks.
To use student-centered teaching method to be born outstanding educated graduates.
To raise the abilities of the students, by doing tutorial tests, practical exams, seminars and projects regularly and practically
To fulfill modern teaching aids and teaching equipments
To send the qualified candidates to be able to study abroad for post-graduate class, short term and long term courses at international universities.
To nurture computer technicians for country and to support the human resource development.
To advance the curriculum for international standard
To advanced teaching aids, classrooms, library and workshop
According to the aim of UNDP, to train and produce IT technicians for developing new business based on IT in private sector and getting job opportunities.
IT Camp At UCSMTLA (25-8-2018) ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မိတ္ထီလာ) ၏ ပထမအကြိမ် IT Camp ကို သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်တွင် နံနက် ၉နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယင်း IT Camp တွင် ဆွေးနွေးပွဲခန်း ၅ ခန်းနှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မိတ္ထီလာ)မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ လုပ်ဆောင်မှုပြခန် ၂ခန်းကိုပါ ထည့်သွင်းပြသမည်ဖြစ်သည်။ IT Camp ကျင်းပခြင်းမှာ အသိပညာဗဟုသုတများ ဖလှယ်နိုင်ခြင်း၊ IT နှင့်ဆက်စပ်၍ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ IT နှင့်ပတ်သတ်သော ခေတ်ပေါ်နည်းပညာများကို လေ့လာဆွေးနွေးနိုင်၇န် ၇ယ်၇ွယ်၍ ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း IT Camp တွင် မိတ္ထီလာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ လေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်တို့မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အဓိကပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်း အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရှင်အသင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်နှင့် ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်း၊ နှင့် IT ဆက်စပ်လုပ်ငန်းရှင်များက ပူးပေါင်းပါဝင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ Unicode Version ကှနျပြူတာတက်ကသိုလျ (မိတ်ထီလာ) ၏ ပထမအကွိမျ IT Camp ကို သွဂုတျလ ၂၅ ရကျတှငျ နံနကျ ၉နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ ကငျြးပသှားမညျဖွဈသညျ။ ယငျး IT Camp တှငျ ဆှေးနှေးပှဲခနျး ၅ ခနျးနှငျ့ ကှနျပြူတာတက်ကသိုလျ (မိတ်ထီလာ)မှ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြား၏ လုပျဆောငျမှုပွခနျ ၂ခနျးကိုပါ ထညျ့သှငျးပွသမညျဖွဈသညျ။ IT Camp ကငျြးပခွငျးမှာ အသိပညာဗဟုသုတမြား ဖလှယျနိုငျခွငျး၊ IT နှငျ့ဆကျစပျ၍ အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးမြား ရှာဖှနေိုငျခွငျး၊ IT နှငျ့ပတျသတျသော ခတျေပျေါနညျးပညာမြားကို လလေ့ာဆှေးနှေးနိုငျရနျ ရယျရှယျ၍ ကငျြးပခွငျးဖွဈသညျ။ ယငျး IT Camp တှငျ မိတ်ထီလာမွို့နယျရှိ ကှနျပြူတာတက်ကသိုလျ၊ နညျးပညာတက်ကသိုလျ၊ လကွေောငျးနှငျ့အာကာသပညာတက်ကသိုလျတို့မှ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြား အဓိကပါဝငျမညျဖွဈသညျ။ ယငျး အပွငျ မွနျမာနိုငျငံ ပညာရှငျအသငျး မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး ကှနျပြူတာပညာရှငျနှငျ့ ကှနျပြူတာလုပျငနျးရှငျအသငျး၊ နှငျ့ IT ဆကျစပျလုပျငနျးရှငျမြားက ပူးပေါငျးပါဝငျကွမညျဖွဈသညျ။
ရှေးဘိုးဘွားတွေကစပြီး ရဟန်းတော်တွေအလိုရှိရာ သုံးဆောင်နိုင်ပါစေဟူသော စိတ်စေတနာနှင့် ပစ္စည်းမျိူးစုံ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ပဒေသာပင်ကို ကထိန်အရံအဖြစ်လှူဒါန်း ခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မိတ္ထီလာ)တွင်လည်း ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ၀န်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ စုပေါင်းကထိန်အလှူတော်ကို ၂၁. ၁၂. ၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
The word fresher welcome points towards Fresher's i.e. the event organised for fresher's. This event is organised by senior students to haveagood communication with the juniors and to welcome the juniors in their university. This event will haveafull day event inauniversity. Juniors will have to perform and show their talents. In University of Computer Studies (Meiktila), the fresher's welcome ceremony of 2018-2019 Academic Year was held on 3rd January, 2019.